ရုပ်ရှင်ထဲမှာတင် မဟုတ်ပဲ တစ်ကယ့်အပြင်မှာ Hero လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်များ - Shwe Khit Online TV
HomeEntertainmentရုပ်ရှင်ထဲမှာတင် မဟုတ်ပဲ တစ်ကယ့်အပြင်မှာ Hero လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်များ
September 22, 2021 Yan Entertainment 0
ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခါမှာတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာတင် မဟုတ်ပဲ တစ်ကယ့်အပြင်မှာ Hero လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ အကြောင်း ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအထဲမှာ ကိုယ်အားပေးတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ ပါလားဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ Benedict Cumberbatch
( ၂၀၁၈ ) ခုနှစ်တုန်းက Benedict Cumberbatch ဟာ Devilery ကောင်လေးတစ်ယောက် ဆီကနေ စက်ဘီးလုဖို့ လုပ်နေတဲ့ လူ ( ၄ ) ယောက်ကို တွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီအချိန်မှာပဲ Cumberbatch ဟာ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကို ချက်ချက်းပြေးသွားပြီး စက်ဘီးလုဖို့ ကြိုးစားသူတွေကို မောင်းထုတ် ခဲ့နိုင်ပါတယ် ။ ကံကောာင်းစွာနဲ့ပဲ Delivery ကောင်လေးဟာ ထိခိုက်တာမျိုး မရှိခဲ့ပဲ စက်ဘီးကလည်း လုတဲ့သူတွေ လက်ထဲ မရောက်ခဲ့ပါဘူး ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ Tom Hardy
( ၂၀၁၇ ) ခုနှစ်တုန်းက Tom Hardy ဟာ လန်ဒန် အနောက်တောင်ပိုင်းမှာ နေထိုင်ခဲ့ပြီး တစ်နေ့မှာတော့ လူငယ် ( ၂ ) ယောက်က ဆိုင်ကယ် တစ်စီးကို ခိုးဖို့ လုပ်နေတာကို တွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ Tom ဟာ ဆိုင်ကယ် ခိုးနေတဲ့ ထို လူငယ်တွေ ကို ဖမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး နောက်ယောင်ခံလိုက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ထို လူငယ် ( ၂ ) ယောက်ကို ဖမ်းမိသွားပြီး သူတို့ရဲ့ ID တွေကို စစ်ဆေးကာ ရဲတွေ ရောက်မလာခင် အချိန်အထိ ထွက်မပြေးနိုင်အောင်လည်း သေချာ စောင့်ကြည့်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ Vin Diesel
Fast and Furious ထဲက မင်းသားကြီး Vin Diesel ကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာတင် မဟုတ်ပဲ အပြင်မှာပါ စိတ်ကောင်းရှိပြီး ကူညီတတ်တဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ရက်မှာတော့ Vin Diesel ဟာ ဆိုင်ကယ်စီးနေရင်းနဲ့ လမ်းမှာ မိသားစု တစ်စု စီးလာတဲ့ ကားဟာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲ မှောက်နေတာကို တွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီအချိန်မှာပဲ သူဟာ ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေ ခုန်ဆင်းပြီး ကားထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ ကလေးတွေ နဲ့ ကားသမားကို အပြင်ကို ထုတ်ပေးပြီး ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ Harrison Ford
( ၂၀၀၀ ) ခုနှစ်တွေတုန်းက ( ၅ ) နာရီ ကြာ တောင်တက်ခရီးစဉ် တစ်ခုမှာ ပါဝင်တဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ တောင်ပေါ်တက်နေရင်းနဲ့ ဆက်လက်ပြီး မသွားနိုင်အောင် အားအင်ကုန်ခမ်းသွားခဲ့ပါတယ် ။ ဒီအချိန်မှာ သူမ နဲ့အတူ လိုက်ပါတဲ့ သူငယ်ချင်းက ဖုန်းဆက်ပြီး တစ်ခြားသူတွေကို အကူညီတောင်းခဲ့ပါတယ် ။ ကံကောင်းချင်တော့ မင်းသားကြီး Harrison Ford ဟာ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ရောက်လာပြီး တောင်တက်သမား ( ၂ ) ဦးကို ကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ် ။ မင်းသားကြီးဟာ အခုလိုမျိူး ကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် သူ့ကိုယ်ပိုင် ဟယ်လီကော်ပတာကို မောင်းဖို့ ( ၁ ) နာရီကို ဒေါ်လာ ( ၁၀၀၀ ) ပေးရတဲ့ လေယာဉ်မှုးကို ငှားခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ Brad Pitt
World War Z ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးနေစဉ် အချိန်တုန်းက ဇာတ်ဝင်ခန်း တစ်ခုအတွက် လူပေါင်း ( ၇၀၀ ) လောက်ဟာ ဖုတ်ကောင် နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ အခန်းကို ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ် ။ ဒီအချိန်မှာပဲ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ ဖုတ်ကောင်နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်နေရင်း ရုတ်တရက် ချော်လဲကျသွားကာ သူမရဲ့ ဒူးကို ထိခိုက်မိသွားပါတယ် ။ သူမရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို မြင်သွားတဲ့ Brad Pitt ဟာ ချက်ချင်းပဲ သူမဆီကို ပြေးလာပြီး ထူပေးကာ ဆေးရုံကို ပို့ပေးပြီး ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပေးခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုပြောပြပေးထားတာကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာတင် မဟုတ်ပဲ တစ်ကယ့်အပြင်မှာ Hero လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်များ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
လူသားတွေ မရှိခင်ကတည်းက ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ သတ္တဝါ အမျိုးအစားများ